Harato anti-vorona tsara indrindra ampiasaina mba hisorohana ny vorona tsy hidona ao amin'ny mpanamboatra sakafo sy ozinina | Manfre
Harato fanoherana ny vorona ampiasaina hanakanana ny vorona tsy hanakona sakafo
Vorona azo antoka vorona dia karazan-damba vita amin'ny polyethylene ary manasitrana miaraka amin'ny zavatra simika toy ny anti-antitra sy anti-ultraviolet ho akora fototra. Izy io dia manana tanjaka avo, fanoherana ny hafanana, fanoherana ny rano ary fanoherana ny harafoana. Izy io dia manana tombony amin'ny fanoherana ny fahanterana, tsy misy poizina ary tsy misy tsirony, ary fanariana fako mora. Afaka mamono ny bibikely mahazatra, toy ny lalitra, moka, sns. Ny fitahirizana dia maivana ary mora ampiasaina tsy tapaka, ary ny fiainana tahiry marina dia mety hahatratra 3-5 taona.
Ny harato fanoherana ny vorona dia ampiasaina indrindra hisorohana ny vorona tsy hidona amin'ny sakafo, ampiasaina amin'ny fiarovana ny voaloboka, fiarovana serizy, fiarovana ny pear, fiarovana ny paoma, fiarovana wolfberry, fiarovana ny fiompiana, voankazo kiwi, sns.
Teknolojika fambolena sy fandrindrana ny tontolo iainana izay mampitombo ny famokarana ary manangana sakana mitoka-monina artifisialy amin'ny akorandriaka hitazonana ny vorona tsy ho ao anaty harato, manapaka ny fantsom-borona, ary mifehy tsara ny karazam-borona. , sns. Miely sy misoroka ny voka-dratsy ateraky ny fihanaky ny aretina viral. Ary manana ny fiasan'ny famindrana maivana, ny alokaloka antonony sns ..., mamorona fepetra mahasoa amin'ny fitomboan'ny vokatra, miantoka ny fihenan'ny famonoana bibikely simika amin'ny tanimbolin'ny legioma, ka ny fivoahan'ny vokatra dia avo lenta sy madio, manome hery matanjaka amin'ny fampandrosoana sy famokarana vokatra fambolena maitso tsy misy fandotoana Antoka ara-teknika. Ny harato miady amin'ny vorona dia manana ny asany koa amin'ny fanoherana ireo loza voajanahary toy ny fikaohon-drivotra sy ny fanafihana havandra.
Ny harato anti-vorona dia be mpampiasa hanokana ny fampidirana vovobony mandritra ny fiompiana legioma, rapeseed, sns., Ovy, voninkazo ary rakotra detoxification kolontsaina sela ary legioma tsy misy loto, sns., Ary azo ampiasaina ho fanoherana ny vorona sy fanoherana ny fahalotoan'ny zana-keto. Io no safidy voalohany voalohany amin'ny fanaraha-maso ara-batana ny voly isan-karazany sy ny bibikely. Avelao ny ankamaroan'ny mpanjifa hihinana “sakafo azo antoka”, ary handray anjara amin'ny tetikasa harona legioma amin'ny fireneko.
Teo aloha: cartridge sivana taratasy maro sosona 4.3 x 8 sivana rano intex spa ho an'ny sivana paompy pisinina
Manaraka: Manalefaka fitaovana amin'ny rano amin'ny fitsaboana rano
Harato fanoherana ny vorona
Stainless vy 316 mitsonika polymer strainer menaka p ...
Wedge Wire Screen Filter Slot Filter Pipe Valid ...
304 304L 316 316L varahina vy varingarina ...
Mpanala zavona fibre ho an'ny asidra solifara